Shina Outlet mens amoron-doko vita amin'ny lamba vita amin'ny matihanina matihanina sy mpanamboatra | Ruisheng
Toerana niaviany: Jiangsu, China Brand anarana: OEM
Laharana modely: Sika palitao Ski: Mahazo ny mariky ny mpanjifa OEM
Halehiben'ny: Misy habe misy loko Kokoa: Colours takiana
Kilasy: Kilasy A fitaovana: Polyester / Customization, Fangatahana ilaina
Vondrona sokajin-taona: Lehilahy olon-dehibe: palitao, palitao mihetsika rivotra
Endri-javatra: Anti-UV, Breathable, QUICK DRY, Windproof Function: tantera-drano, rivotra
Vidiny ambany: Betsaka ny zavatra azo ifampiraharahana
1 ， Izy io dia maivana sy maivana, midika izany fa entinao ho toy ny entana maika rehefa mandeha amin'ny tontolo mando ianao - miafina ao am-paosinao ankavia izy io, mba hahafahanao mampiditra azy mora foana ao anaty kit.
2 ， Ny antsipiriany amin'ny famolavolana mahasoa dia misy ny akanjo vita amin'ny fiarovan-doha azo ampiharina sy ny fonon-tanety vita amin'ny lamban-tsorony, ny paosy a-dada iray ary ny fidio-drivotra anatiny.
3 ， Ny lamba dia mety ho rivotra mahomby ary manana endrika famolavolana matanjaka. Elastic amin'ny hem sy cuffs, paosy somary matevina, lamba firakotra roa, paosin-tànana misy zipo (ho an'ny rivotra) ary zipera ho mora tery. Ny hood ihany koa dia tena tsara miaraka amin'ny spike ary efa namboarina tamin'ny vozon'akanjo
1.Ny mpanjifanay dia misy marika iraisam-pirenena maro. Ny sasany dia nifandray taminay 5-8 taona.
2. Manana ekipa mpivarotra 2 izahay: lamba, akanjo. Ny varotra tsirairay dia manana traikefa 8 taona miasa. Izahay dia afaka manome anao serivisy tokana hijanona ho an'ny vokatra rehetra. Ny fiaraha-miasa amin'ny ekipa tsara dia mety hiantoka hamaly ireo karazana fanontaniana rehetra ao anatin'ny 2 ora. Ny kolontsainan'ny varotra dia fandrosoana ary asa iraisan'ny ekipa.
Mifehy mafy ny fitantanana ny famatsiana famatsiana izahay. Manana orinasa izahay, 2-3 ora miala amin'ny lianyungang. Mandamina lamba / fitaovana izahay, ohatra: mifehy ny kofehy ka hatramin'ny lokony; Manome serivisy tanteraka izahay avy amin'ny famolavolana / zavakanto, hatrany amin'ny prototype voalohany, prototype farany, santionany PP, famokarana betsaka, hatramin'ny fizahana mialoha ny fandefasana.
Previous: mens Yoga Clothes Tummy control High waisted Workout Yoga Leggings
Manaraka: Vehivavy palitao mafana dia manohana fividianana betsaka ny palitao mafana